NYI LYNN SECK 18+ DEN: အသက် သုံးဆယ်
Posted by NLS at 4/29/2010 10:08:00 PM
30 Responses to “အသက် သုံးဆယ်”
ပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ ကိုညီလင်းဆက်...
လိုအင်ဆန္ဒတိုင်းကို တောင့်တတိုင်း ပြည့်စုံနိုင်ပါစေ :)
Happy Birthday, Ko NLS.
Be Happy & Peaceful.
ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့သော မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ လင်းဆက်ရေ..
လုပ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိသမျှ အလုပ်အားလုံးကို ချောချောမွေ့မွေ့ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါစေ..
နေ့ တိုင်းမှာလည်း ပျော်ရွှင်ပါစေ
Happy Birthday Ko Nyi Lynn Seck!!!
Happy Birthday, Bro Nyi Lynn !! Wishing you peace, love, good health, success, joy & happiness on your special day and always .. May all your dreams & wishes come true .. Best wishes to you :)
31 ထဲမှာပေါ့ ... ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ။
အသက်သုံးဆယ် မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် မိမိ ပျော်ပိုက်သော၊ လုပ်ချင်သော အလုပ်တွေကို စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာစွာနဲ့ ပြည့်ပြည့်၀၀ လုပ်နိုင်ပါစေ။
ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့သော ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီး
မိမိအကျိုး သူတစ်ပါးအကျိုးကို ဆထက်ထမ်းပိုး
Happy Birthday Nyi Lynn Seck!
Happy Birthday ညီလင်းဆက်....!!!စာတွေဆက်လက် ဖတ်နိုင်ပါစေ၊ ထို့အတူ စာတွေဆက်လက်ရေးနိုင်ပါစေ...
ကိုယ်ရေးမယ့် သီချင်းစာသားကို ကိုမျက်လုံးကြီးက အရင်ရေးသွားတော့ ရင်ခံလိုက်တာ။ :D
လူရော ညာဘက် လက်ညိုးလေးရော ကျန်းမာပါစေဗျာ Photo တွေ ဆက်ရိုက်နိုင်အောင်လို့ :)
Happy 30th Birthday to U !!!
Haveagood life, not justalong life.
မိန်းမရဖို့ နီးစပ်လာပြီပေါ့ ကိုလင်းဆက်ရာ.. နှစ်တိုင်း စောင့်ကြည့် ဖြစ်ပါတယ်.. ဘယ်လိုဖြတ်သန်းသွားလဲ ဆိုတာလေးပေါ့။
အထက်က မောင်နှမတွေ နည်းတူ ဆုတောင်းပေးသွားပါတယ် ညီ
ခန္ဓာ့ဝန်ကို လွယ်ကူစွာ ဆက်လက် ထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေ...
ခင်ဗျားအတွက် အရေးအကြီးဆုံး ဆုတောင်းကတော့ “စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ပါနိုင်ပါစေ” ထင်တယ်။ အများအတွက် လုပ်ပေးချင်တာတွေ အများကြီးရှိနေတဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ စိတ်ကူးတွေ တကယ်တန်း အကောင်အထည်ဖော်လာနိုင်ပါစေလို့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဆုတောင်းတယ်ဗျာ။
happy b-late late late lated birthday!!!!!!!
အလုပ်တွေ ရှုပ်နေတာနဲ့ မ၀င်ဖြစ်လို့ ခုမှ ၀င်ရတယ်...
Ashin Lokapala said...
ကိုညီလင်းဆက်ရေ... ဒီစာမျက်နှာကပဲ ပျော်ရွင်စရာကောင်းပြီး အဓိပါယ်ပြည့်ဝတဲ့ ဘဝတစ်ခု ပိုင်ဆိုင်ပါစေ...လို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ဗျာ...